कान दुखेमा यसरी घरैमा उपचार गर्न सकिन्छ - ज्ञानविज्ञान
कानको दुखाइ कुन बेला सुरु हुन्छ भन्न सकिन्न । विभिन्न रोग तथा संक्रमणले गर्दा कान एक्कासी दुख्न सुरु हुन्छ । यसको दुखाइ कुनै बेला यति सघन हुन्छ कि बिरामीलाई सहन साँच्चै नै गाह्रो हुन्छ । चिकित्सकसम्म पुग्दा सम्ममा कान दुखाइले निकै ठुलो पिडा दिने गर्छ ।
– मेतीको दाना तेलमा हाल्ने र तताउने । जब यो सेलाउँछ, त्यसपछि छानेर प्रयोग गर्दा कानको दुखाई कम हुन्छ ।
(घरेलु उपचार गर्दा गर्दै पनि दुखाइमा राहत नभए सके सम्म चाँडो चिकित्सकलाई देखाउँनु उत्तम हुन्छ ।)
Topics #कानको उपचार
Don't Miss it सात दिन मै आफ्नो उमेर १० बर्ष कम देखाउन चाहानुहुन्छ ? घरेलु उपाय
Up Next जुत्ता लगाउदा मोजा नलाई लगाउने बानि छ ? यस्ता छन् स्वास्थ्यमा असर पर्ने